Barcelona Oo Old Trafford Ku Garaacday Man United, Red Devils Oo Fursadeedii Iska Lumisay Iyo Blaugrana Oo Camp Nou Imanaysa Iyada Oo Kalsooni Wayn Qabta. - GOOL24.NET
Barcelona Oo Old Trafford Ku Garaacday Man United, Red Devils Oo Fursadeedii Iska Lumisay Iyo Blaugrana Oo Camp Nou Imanaysa Iyada Oo Kalsooni Wayn Qabta.
Barcelona ayaa guul muhiim ah Old Trafford kaga soo gaadhay Manchester United kulankii lugta hore ee siddeed dhamaadka UEFA Champions league. Gool uu Luka Shaw iska dhaliyay isla markaana uu Luis Suarez sabab u noqday ayaa keenay in Man United ay guuldaro ku soo gaadhay.
Manchester United oo maanka ku haysa imtixaanka ku sugaya Camp Nou ayaa awoodi wayday in ay wax gool ah ku dhaliso garoonkeeda taas oo ah mid walwal ku abuuraysa jamaahiirta Man United iyo tababare Solskjaer.
Barcelona ayaa hadda talaabo muhiim ah u qaaday in ay afar dhamaadka Champions League u soo bixi karto inkasta oo ay wali Man United haysato fursad ay wax ku badali karto
Kaydka: Anthony Martial, Andreas Pereira, Phil Jones, Marcos Rojo, Sergio Romero, Jesse Lingard, Juan Mata.
Kaydka:Samuel Umtiti, Arturo Vidal, Sergi Roberto, Jasper Cillessen, Ousmane Dembele, Malcom, Carles Alena.
Qaybtii hore ee kulankii Manchester United iyo Barcelona ayaa ahaa mid aad u adag isla markaana ay labada kooxood dadaal badan ku sameeyeen balse waxaa jiray taxadar badan oo ay labada kooxood ka muujiyeen kulankan taas oo lugta ka xidhay xamaasadii ay ciyaartu lahayd.
Daqiiqadii 12 aad Barcelona ayaa goolkeeda furitaanka la timid kadib markii uu Luis Suarez kubbad madax ah ku qabtay goolka Man United laakiin kubbada ayaa ku sii dhacday Luka Shaw kaas oo goolkan loogu qoray in uu iska dhaliyay wuxuuna Suarez seegay fursada uu kaga bixi karayay abaartii gool dhalinta Champions league.
Muuqaal caawiyaha garsoorka ayaa lagu go’aamiyay haddii uu goolkani ahaa mid sharci ah wuxuuna markii hore calanwaduhu tilmaamay in uu offside jiray taas oo markii danbe uu VAR meesha ka saaray waxaana sharci noqday goolka ay Barcelona hogaanka kula wareegtay.
Barcelona ayaa gabi ahaanba la wareegtay kubbad haynta waxaana Man United waqti badan dhibaato ku noqotay sidii ay kubbada ku heli lahayd laakiin Barcelona ayaa weerar ahaan u liidatay iyada oo aan ku ciyaarin dardartii weerar ee looga bartay.
Manchester United ayaa ciyaarta si gaabis ah ugu soo laabtay waxayna ugu danbayn awooday in ay halis ku abuurto goolka Barca laakiin deg deg badan oo ku jiray weerarka Uited waxay sameeyeen go’aano qaldan oo ay ku seegeen fursado fiican oo ay heli kareen.
Ciyaarta ayaa noqotay mid gaabis ku soo laabtay isla markaana ay wali labada kooxood raadinayeen goolal balse ay taxadar badan muujinayeen waxaana qaybtii hore lagu kala nastay 1-0 ay Barcelona hogaanka ciyaarta ku haysay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta ayay Man United doonaysay in ay ciyaarta ku soo laabto waxayna Barcelona qaybtii laabad ee ciyaarta noqotay mid si gaabis ah ku bilaabtay. Marcus Rashford ayaa fursad uu goolka barbaraha ku dhalin karayay helay daqiiqadii 54 aad laakiin waxa uu ku fashilmay in uu bartilmaameedka helo.
Man United ayaa noqotay kooxda cadaadiska badan saaraysay Barcelona waxayna kooxda Valverde noqotay mid walwal badan ka qabtay in ay United keensato goolka barbaraha waxayna khadka dhexe ee Barca u muuqdeen kuwo daal uu ka muuqday.
Daqiiqadii 65 aad Luis Suarez ayaa ugu dhawaaday in uu Man United dhibaato kale ku abuuro kadib markii uu darbo hal taabasho ah uu ku tuuray goolka United wuxuuna kubbad halis ah ka helay Semedo laakiin Suarez ayaa shabaqa banaanka kubbada ku dhuftay.
Isla daqiiqadii 65 aad Valverde ayaa hal mar ciyaarta soo wada galiyay Sergi Roberto iyo Arturo Vidal wuxuuna saaray Athur Melo oo aad u liidatay iyo Coutinho waxayna markiiba Barca heshay fursad gool dhalineed iyada oo De Gea uu gool ka beeniyay Alba.
Daqiiqadii 68 aad Solskjaer ayaa ciyaarta ka saaray Lukaku oo garoonka ku dhex lumay wuxuuna weerarkiisa ku soo xoojiyay Anthony Matial kadib Jesse Lingard ayaa lagu badalay Diogo Dalot oo bandhig fiican kulankan ka sameeyay.
Baracelona ayaa markale dib ula wareegtay kubad haynta ciyaarta waxayna markale bilawday in ay raadiso goolka labaad halka Man United ay isku daraysay difaacasho adag iyo waliba fursado rogaal celis ay goolka barbaraha ku raadinayeen.
Daqiiqadii 83 aad Martial ayaa u muuqday in uu dhalinayo goolka ay Man United waqti dheer raadinaysay kadib markii uu kubbad kala soo xarooday dhinaca midig laakiin Gerard Pique ayaa meel hal mitir goolka u jirtay kubbada si cajiib ah goolka kooxdiisa uga difaacay.
Daqiiqadii 85 aad waxaa ciyaarta laga saaray Marcus Rashford oo aan habeen fiican qaadan waxaana ciyaarta soo galay Andreas Pereira waxayna Man United wali raadinaysay qaabkii ay goolka barbaraha ku keensan karto.
Dhamaadkii ciyaarta Barcelona ayaa waqtigii ku lumisay kubbad hayn waxayna United awoodi wayday in ay soo laabasho samayso iyada oo ciyaartu ku dhamaatay 1-0 ay Barcelona guul ku gaadhay waxayna United iskeeni doontaa Camp Nou iyada oo ah kooxda uu cadaadiska ugu badani saaran yahay.